एसियाकै तेस्रो ठुलो हस्पिटल मेडिसीटी नेपालमा अजबाट सन्चालन ,नेपालीलाई उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने…के के सुबिधा पाइन्छ त ? हेर्नुहोस – Digital Newspaper
एसियाकै तेस्रो ठुलो हस्पिटल मेडिसीटी नेपालमा अजबाट सन्चालन ,नेपालीलाई उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने…के के सुबिधा पाइन्छ त ? हेर्नुहोस
October 12, 2017 nepsnews
ललितपुर – अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सेवासहित ७५० बेडको मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। डा.उपेन्द्र महतोले लगानी गरेको सो अस्पताल गैरआवासीय नेपाली दिवस अवसर पारेर बुधबार उद्घाटन गरिएको हो।
← भन्सारमा घुस लिदै सशस्त्र प्रहरी, दीपक मनाङेलाई लाईभ कडा प्रश्न, के भनेर भोट माग्नु हुन्छ ? हेर्नुहोस
आज अक्टुबर १३ तारिक शुक्रबार ,आजको बिदेशी कतार साउदी ,मलेसिया लगायत मुद्राको विनिमय दरमा धेरै फरक .. हेर्नुहोस आजको ताजा दर भाउ .. →
सुनतस्करको सुन बोक्ने भरियाले नै ६ किलो सुन लुकाएपछि…
October 12, 2017 nepsnews Comments Off on सुनतस्करको सुन बोक्ने भरियाले नै ६ किलो सुन लुकाएपछि…
लियोनेल मेस्सीको नेपाललाई सहयोग … रामेछापमा बन्यो स्वास्थ्य चौकी
October 13, 2017 nepsnews Comments Off on लियोनेल मेस्सीको नेपाललाई सहयोग … रामेछापमा बन्यो स्वास्थ्य चौकी
विदेशबाट फर्किदा श्रीमान घरको न घाटको, दुधे बालक छोडेर आमा बेपत्ता !
August 1, 2017 nepsnews Comments Off on विदेशबाट फर्किदा श्रीमान घरको न घाटको, दुधे बालक छोडेर आमा बेपत्ता !